चलचित्र 'रातो टीका निधारमा' बारे के भन्छन् कलाकार ? (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
चलचित्र ‘रातो टीका निधारमा’ बारे के भन्छन् कलाकार ? (भिडियो सहित)
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:१९
आज शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको ‘रातो टीका निधारमा’ फरक कथा समाबेश भएको कलाकारहरुले बताएका छन्। चलचित्रको प्रिमियर शो मा सहभागी भएका कलाकारहरुले पृथक र हाँस्य कथामा चलचित्र बनेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
अभिनेता तथा निर्देशक अशोक शर्माले निर्देशन गरेको फिल्ममा रातो टीका निधारमा गीतलाई रिमेक गरी समावेश गरिएको छ । उमेश पाण्डे र रमना श्रेष्ठले गाएको गीतको नयाँ भर्सन गायक प्रमोद खरेल र गायिका मेलिना राईले गाएका छन्। अल्लारेको रातो टीका निधारमामा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरले नृत्य गरेका थिए भने नयाँ भर्सनमा अंकित शर्मा र साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले नृत्य गरेका छन्।
किरण शर्मा र कृति शर्माद्वारा निर्मित फिल्ममा अंकित र साम्राज्ञीको साथमा रवीन्द्र झा, नीता ढुंगाना, खुस्बु खड्का, बुद्धि तामाङ, वसुन्धरा भुषाल, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा, लक्ष्मी गिरी, अरूणा कार्की, राजराम पौडेल, कमला रेग्मीलगायतका कलाकारको अभिनय गरेका छन् ।
चलचित्रबारे कसले के भने ?
Prevअब काठमाडौं आउने ठूला सवारी नारायणगढमै रोकिने
ताप्लेजुङको धुन्सासहित तीन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य घोषणाNext